Nwoke di na nwunye na nwanyi di na nwunye - akparamagwa nke mmekorita
Enwere ọtụtụ ihe mere ndị okenye abụọ na-alụbeghị di na nwunye nwere ike ịmalite ikwurịta okwu nke ọma karịa ka a na-enye maka ịkpọtụrụ ndị mmadụ. Mkparịta ụka nke mmekọrịta dị n'etiti nwoke lụrụ di na nwanyị lụrụ di na-adabere n'echiche nke onwe ha site na ibe ha na site na ọha mmadụ, ma ọ bụrụ na a mara nke a. Ọ na-adaberekwa n'ọtụtụ ọnọdụ nke nkwurịta okwu natara ọhụrụ gburugburu.
Ihe kpatara mmekorita
Ọ bụghị mgbe niile ka mma nwoke na nwanyị lụrụ di na nwunye na-enwe mmekọrịta chiri anya, mgbe ụfọdụ ọtụtụ afọ gafere, n'oge ndị mmekọ na-enwe afọ ojuju na nkwurịta okwu na ịdị n'otu nke onye ọ bụla ọzọ, na-enweghị na-agabiga akara nke nraranye n'ezie. Ọtụtụ mgbe, ọ na - eme ma ọ bụrụ na ha achọtaghị obi ụtọ n'alụmdi na nwunye ma ọ bụ na njedebe nke mbụ kwụsịrị. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ma hụkwa n'anya, nke, na-adabere n'àgwà na mmetụta nke ndị mmekọ, nwere ihe karịrị otu afọ. Ihe ọzọ - mgbe ndị agbamakwụkwọ ahụ chọpụtara na ha adaghị ọnụ, ma otu n'ime ha "na-apụ n'anya" site na mmiri, ebe ọ bụ na isi ike adịghị njikere ịgba alụkwaghịm.
N'elu ụgbọelu na-akpachi anya, mmekọrịta dị n'etiti nwoke na nwanyị na nwanyị lụrụ di na nwunye nwere ike ịgafe oge, ma ọ bụ malite na ya ma ghara ịkwaga na mmetụta miri emi. Nke a na - eme: site na enweghị afọ ojuju n'alụmdi na nwunye (omume, nke ime mmụọ na / ma ọ bụ nke anụ ahụ), site n'ịbụ ndị nwere obi ụtọ na mmetụta dị ugbu a na ịchọsi ihe ike. Ọtụtụ mgbe, ịhụnanya dị mkpụmkpụ.
Dabere n'àgwà nwoke a lụrụ di na nwunye, ọbụnadị nwanyị lụrụ di na nwunye, njikọ nke njikọ ya ma ọ bụ nke ya na ya nwere ike: zoo nzuzo (ihe ize ndụ nke ịkụ ọkpọ, ọnụnọ nke di na-ekwo ekworo, ụmụ, ịgba alụkwaghịm na- adịghị mma) ma ọ bụ nanị ịkwasa ozi ọma.
Ebe ọ bụ na ndị mmadụ abụọ na-adọrọ mmasị na ibe ha n'ihi na enwere ike ịdabere na ya na enweghi ihe ize ndụ ụfọdụ metụtara ndị mmekọ na-abụghị di, onye ekwesịghị ịtụ ụjọ (ọ bụrụ na ọ nweghị ihe kpatara ya). Ọ dị mkpa ịnọdụ ala ma nyochaa ihe mere ha ji jikọọ na njikọ a na ihe ha chọrọ ya. Dabere na nke a, gbanwee àgwà gị na iwulite mmekọrịta gị na ndị ọzọ.
Ebee ka ị ga-amata nwoke?
Nwoke di na nwunye huru nwanyi di ya n'anya - ihe iriba ama
Ịhụnanya na-enweghị mmeri
Nwa m hụrụ n'anya
Olee otú ị ga-esi bụrụ onye kacha mma maka ya?
Ịhapụ onye ị hụrụ n'anya
Ihe nzuzo nke nrafu nke nwoke
Ebee ka ịchọta nwoke ahụ?
NLP maka Ụmụ nwanyị
Olee otú ị ga-esi mara mma ụmụ nwoke?
Ọ bụrụ na mmadụ anaghị akpọ
Kedu otu a ga - esi bụrụ onye naanị nwoke?
Olee otú ị ga-esi adọrọ uche gaa onwe gị?
Begonia tuber - wintering
Aries na Capricorn - Mmekọrịta na mmekọrịta ịhụnanya
Herpes na ụmụ ọhụrụ
Milkshake - ihe oriri na-atọ ụtọ n'oge okpomọkụ
Nkuzi maka nwa amuru
Nri achịcha na ude
Kronos - akụkọ banyere Kronos na ụmụ ya
Uma Thurman kwuru banyere nraranye nke Quentin Tarantino na setịpụ ihe nkiri ahụ bụ "Kill Bill"
Uwe ejiji 2014
Kedu ihe ga-eme mgbe mgbatị ga-efu?
Ylang Ylang Oil - Njirimara na Ngwa
Karịa ka ị na-emeso barley na nwa?
Kedu ka esi esi kpoo osisi na osisi?
Mmiri Na-erughị Afọ isii - Ọchịchị 2013
15 kpakpando bụ ndị buru amụma na ha nwụrụ
Oké égbè mmiri n'April - ihe ịrịba ama mmadụ
Aha ndị dị iche iche na ụlọ akwụkwọ ọta akara
David Bowie na Iman
South Korea - ogige ntụrụndụ
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị